निशान, बुद्ध, प्रताप र सागरमा को होला भारी ?
आज : Sunday, February 17, 2019 | २०७५ फाल्गुण ५ आइतबार
आठैप्रहर संवाददाता - | २०७४ भदौ १६ शुक्रबार
असोज २ गते प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ र त्यहाँ राजनीतिक दलहरु प्रतिस्पर्धा गर्न अन्तिम तयारीमा छन् । यो चुनावमा कसले बाजी मार्ला ? अरु प्रदेशमा जस्तै एमाले नै पहिलो होला कि कांग्रेसले बाजी मार्ला ? माओवादीले पो आश्चर्यमा पार्ला वा मधेसवादी दलहरु अघि आउलान् ?
राजनीतिको यो पेचिलो प्रश्नभन्दा अहिले ठूलो प्रश्न बनेर सबैको अघि उभिएको छ । त्यो हो, नेपाल आइडलमा निशान भट्टराई, बुद्ध लामा, प्रताप दाश र सागर आलेमध्ये को बाहिर जालान् वा को रहलान् ? नयाँ टेलिभिजन च्यानल एपी—१ म झण्डै पाँच महिनादेखि जारी यो गायिकी प्रतिस्पर्धाले गीत संगीतप्रति रुची राख्नेलाई मात्र नभएर राजनीतिककर्मी र राजनीतिक समाचारमा सधै चासो राख्ने पत्रकार र समाजका सबै क्षेत्रमा कौतुहल जगाएको छ । यस्तोमा हिजो बेलुका ९ बजे दिएको प्रस्तुतिलाई दर्शक—श्रोताको मतको आधारमा आजै बेलुका ९ बजे फैशला गरिनेहुँदा माथिको प्रश्नले सबैलाई तताएको छ ।
आज चार जना प्रतिस्पर्धीमध्ये एक जना बाहिर पुग्नेछन् र प्रतिस्पर्धामा तीन जना बाँकि रहनेछन् । फाइनल पुग्ने तीन प्रतिस्पर्धीमा को योग्य छन् भन्ने बहश अहिले सामाजिक सञ्जालमा बढि चलेको छ । यो बहश कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धीको योग्यताको आधारमा भन्दा जाती र क्षेत्रको आधारमा चल्न थालेको आरोप प्रत्यारोप पनि सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको छ ।
भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरुमा यस्ता ‘रियालिटी शो’ हरुले यो रुपमा चर्चामा पाउनेगरेकोमा नेपालमा यस्ता शोहरुले यो रुपमा कमै चर्चा पाउने गरेका थिए । यही कारण हुनुपर्छ, यो प्रतिस्पर्धालाई अझै भव्य बनाउन यसको अन्तिम प्रतिस्पर्धा कतारको दोहामा गरिदैछ । असोज ६ गते हुने यो प्रतिस्पर्धामा बिभिन्न हिसाबले भाग लिन झण्डै ८० जना त्यहाँ पुग्दैछन् । जसमा, यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका सबै १२ जना पनि हुनेछन् । तर, प्रतिस्पर्धा भने अन्तिम तीनमा पुगेका बीच नै हुनेछ ।
कतारको दोहामा हुने फाइनल प्रतियोगिताको आयोजकमा एपी—१ सँगै ‘एभरेष्ट नेपाल युथ एसोसियशन’ र ‘ओन्याक्स वन इन्टरनेशनल’ नामका संस्था पनि जोडिएका छन् । जसमा प्रस्तुति दिन भारतको मुम्बईबाट नृतकि तेरिया मगर र अमेरिकाबाट गायिका नलिना चित्रकार आइपुग्नेछन् । गायक हेमन्त शर्मा र कलाकार नारद खतिवडालाई पनि सो कार्यक्रममा अतिथि कलाकारका रुपमा बोलाइएको छ ।
र, यत्रो खर्च गरेर भव्यरुपमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा फैशला हुनेछ, को बन्नेछ नेपाल आइडल ? आजसम्म निशान भट्टराई, बुद्ध लामा, प्रताप दाश र सागर आलेबीच प्रतिस्पर्धा रहेकोमा आज राती नै एक जना बाहिरिएपछि यिनैमध्येका तीन जना बाँकि रहनेछन् । असोज ६ गते आउने यसको फैशलाले सायद असोज २ को चुनावबाट आउने फैशलालाई नै छायाँमा पो पार्छ कि ?